Semalt: Tricks Spammers Anoshandisa Kubudirira?
Michael Brown, the Semalt , inotaura kuti hazvina basa kuti iwe wakangwarira sei, spam nguva dzose inowanikwa ma-email emafaira mubhokisi rako. Chii chakaoma kunzwisisa ndechekuti spammers anotarisira kuwana sei iyo maizai e-mail. Kunyangwe iwe unogona kutora matanho ekudzivirira, pane zvishoma iwe unogona kuita nehutano. Mukufamba kwenguva, spammers nguva dzose vanowana nzira yekukutumira iwe kero ye email - noleggio gonfiabili oristano. Vashandi vanongokundikana kukwanisa kunzwisisa chikonzero chekuita chiito ichi chakaipa.
Voxbox World Telecom Inc yeCanada haina kuonekwa sekambani inobatsira. Zvisinei, vasikana vanoratidzika sevasina hanya nezvazvo. A spammer anozviti iye Francis akanyengedza kambani iyi mumishumo yemeseji. Francis achingozvitenga zvigadzirwa kubva kuVoxbox ndokubva asarudza kutumira spammy mitsva kuti awane mutori wemakaro uye kutengesa zvikamu zvake pane purofiti.
Tsvina iyi uye "pomp" inove yakakurumbira. Kunyange kana uine filera dze spam, spammers nguva dzose vanowana nzira yekuvadzivirira kuti vave nechokwadi chekuti ma spam emails avo anopiwa kune anenge achida kugamuchira. Vanoshandisa kushandisa sarudzo inotaurwa pamusoro apa sezvo ichivabvumira kuti vabudirire kunze kwekuti vave nehukama kune webhusaiti ivo vari kuenda ku spam. Zvose zvavanoda ndezveshoko rinosungirirwa.
Tsvakurudzo yakaitwa naJonathan Zittrain, purofesa weLydford University uye Laura Frieder, purofesa wepurezidhendi yePurdue, akaratidza kuti chikonzero nei vaparadzi vachibudirira ndechokuti zvirongwa izvi zvinoshanda! Kana zvinhu zvose zvichifamba maererano neurongwa, vanoita zve-5 kubva muzana vachidzoka apo avo vakakwanisa kutenga pfuma yavo vanorasikirwa nevanenge 7 muzana yemari yavo.
Mashoko akanaka ndeokuti iwe unogona kushandisa nzira iri nyore asi inoshanda yekubvisa spammers. Chokutanga pane zvose, unofanira kubvisa spam. Hazvina mhosva kuti zvakanaka sei uye kuedza chipo chacho, chidzivise uye usatenga sengo. Nokuti vanhu vazhinji vanozvitenga chete nokuti havanzwisisi kuti iri spam. Uye nguva dzose yeuka kuti kuedza kuita bhiri nokukurumidza kunogona kutamba tricks pamusoro pako.